Wayne Rooney Oo Bar-bareeyey Rikoodhkii Gool Dhalinta Manchester United ee Sir Bobby Charlton Hore U Dhigay
HomeWararka MaantaWayne Rooney Oo Bar-bareeyey Rikoodhkii Gool Dhalinta Manchester United ee Sir Bobby Charlton Hore U Dhigay
Ciyaaryahan Wayne Rooney, ayaa soo qabtay oo barbareeyey Halyeygii Sir Bobby Charlton – si uu ula wadaago laacibka ugu goolasha badan taariikhda kooxda Manchester United.
31 jirkan, gool uu ka dhaliyey tartanka FA Cup kooxda Reading ayuu kaga dhigay tirada goolashiisa 249 uu ku saxeexay 543 ciyaarood, sidaasna ku xaqiijiyey 215 ciyaarood iyo afar xili ciyaareed in ka yar oo ka degdeg badan intii ay ku qaadatay Charlton.
Rikoodhkan ayaa yaalay tan iyo 1973 dii, laakiin Rooney wuxuu imika u muuqdaa mid haysta fursadii uu ku dhaafi lahaa ee uu isagu mid cusub ku dhigan lahaa.
“Naadigu waa qayb weyn oo noloshayda kamid ah, aadna sharaf ayay iigu tahay inaan taariikhdaas gaadho oo la sinmo Sir Bobby,” ayuu Rooney yidhi, kadib ciyaarta ay kooxdiisu 4-0 ku badisay.
“Waa wakhti sharafeed. Inaad ku samayso koox u weyn sida Manchester United, Sharaf iyo karaamo aad u saraysa ayay ii tahay.”
Tabobare Jose Mourinho ayaa isna intaas ku daray: “Maalin ka xiiso iyo xamaasad badan ayaa soo socota. Arin weyn ayay ahayd, laakiin waxaan jeclahay inuu gool kale dhaliyo! Waa wiil aad u qaali ah oo kooxda ku weyn, dhamaantayona waxaanu la jecelahay inay arintaasi u suurto gasho. Inuu Wayne qabsado shaqsiga ugu goolasha badan koox u culus sida naadigan oo kale, waxaan la qiyaasi karin ayay u tahay isaga.”
Sanadii 2015, Rooney wuxuu sidan oo kale u jabiyey oo u dhaafay ciyaaryahanka koobka aduunka England u qaaday ee Charlton rikoodhkiisii gool dhalinta xulka, oo 49 ahaa, ilaa imikana wuxuu gaadh siiyey 53 gool.